China BaGa4Se7 Makristasi Akagadzira uye Mutengesi | Dien
nzvimbo yeboka: PC
Hutachiwana dungwerungwe: 0.47-18μm
Yakakura NLO coefficient: d11 = 24 pm / V
Kukuvadza chikumbaridzo (1μm, 5ns): 550MW / cm2
Yakakwira-mhando makristaro eBGSe (BaGa4Se7) ndiyo selenide analogue yeiyo chalcogenide komputa BaGa4S7, ine acentric orthorhombic chimiro chakaonekwa muna 1983 uye iyo IR NLO mhedzisiro yakashumwa muna2009, ichangobva kugadzirwa IR NLO kristalo. Yakawanikwa kuburikidza neBridgman-Stockbarger maitiro. Iyi kristaro inoratidzira yakakwira transmittance pamusoro pehupamhi hwakawanda hwe0.47-18 μm, kunze kwekukwira kwekukwirisa pakatenderedza 15 μm.
Iyo FWHM yeiyo (002) yepamusoro yekutsemura curve ingangoita 0.008 ° uye iyo transmittance kuburikidza yakapukutwa 2 mm gobvu (001) ndiro iri kutenderera 65% pamusoro pehupamhi hwakawanda hwe1-14 μm. Mhando dzakasiyana dze thermophysical zviyero zvakayerwa pamakristaro.
Iyo yekupisa yekuwedzera maitiro muBaGa4Se7 hairatidzi yakasimba anisotropy ine αa = 9.24 × 10-6 K . Iyo yekupisa diffusivity / yekupisa conductivity coefficients yakayerwa pa 298 K ari 0.50 (2) mm2 s − 1 / 0.74 (3) W m-1 K-1, 0.42 (3) mm2 s − 1 / 0.64 (4) W m-1 K, 1, 0.38 (2) mm2 s-1 / 0.56 (4) W m-1 K-1, pamwe ne a, b, c crystallographic axis zvichiteerana.
Uye zvakare, iyo yepamusoro laser yekukuvara chikumbaridzo yakayerwa kuve 557 MW / cm2 uchishandisa Nd: YAG (1.064 μm) laser pasi pemamiriro e5 ns kupomba upamhi, 1 Hz frequency, uye D = 0.4 mm saizi saizi.
BGSe (BaGa4Se7) kristaro inoratidzira hupfu yechipiri harmonic chizvarwa (SHG) mhinduro iyo ingangoita kakapetwa ka3-3 iyo yeAgGaS2. Iyo yekumusoro laser kukuvara chikumbaridzo ingangoita 3.7 nguva iyo yeAgGaS2 kristaro mumamiriro akafanana.
BGSe kristaro ine hukuru husina mutsindo, uye inogona kuve netarisiro yakafara yekushandisa kunoshanda pakati peiyo IR spectral dunhu Inoratidza inonakidza terahertz phonon-polaritons uye yakakwira nonlinear coefficients ye terahertz chizvarwa.
Zvakanakira IR IR kuburitsa:
Inokodzera dzakasiyana-siyana kupomba sosi (1-3μm)
Wide tunable IR kuburitsa renji (3-18μm)
OPA, OPO, DFG, kusagadzikana / kuwedzeredza, cw / kupomba kupomba
Chiziviso chakakosha: Sezvo iyi iri nyowani yerudzi rwekristaro, mukati mekristaro inogona kunge iine mashoma marara, asi isu hatigamuchire kudzoserwa nekuda kwechikanganiso ichi.
nzvimbo yeboka PC
Hutachiwana dungwerungwe 0.47-18μm
Yakakura NLO coefficient d11 = 24 pm / V
Kukuvadza chikumbaridzo (1μm, 5ns) 550MW / cm2